Namuhla iziyaluyalu ezivamile imvelo ezithathelwanayo lesi sifo. Kubangelwa ukungenisa pathogenic amagciwane nezinto ezincane eziphilayo, lezi zifo bahlukile yayo hlobo. Okokuqala, lokhu kungenxa ekhonweni lomzimba lokukwazi synthesize omzimba athile ngokwemvelo kulesi sifo, okwenza khona amasosha omzimba (amasosha omzimba kuleli fomu nosological), kanti okwesibili, ukugcina ukuphikelela zabo egazini isikhathi eside, sibangela amasosha omzimba eziphikelelayo futhi ngokuvamile impilo yonke.
Uma kungenakwenzeka ukuqinisekisa izinga ofanele masosha omzimba egazini ngesikhathi emva booster lokugoma olulodwa eyenziwa (elilodwa noma ambalwa). Ezinye zezifo bemvelo ezithathelwanayo ufeza ababalulekile nesimungumungwana. Isimungumungwane igciwane, njenganoma iyiphi enye, uma lingena emzimbeni womuntu kunomthelela yokuthi baqale synthesize amasosha omzimba nesimungumungwana.
Amasotsha omzimba ejenti ehlanganisa ulwazi antigenic eziyinkimbinkimbi (ulwazi mayelana amaprotheni angaphandle kwakwande emzimbeni igciwane) elibangela ukuhlonza okwengeziwe nokubhujiswa igciwane. Ngasekuqaleni Isimungumungwane igciwane ajwayelekile kakhulu sina, kodwa lapho kufika inkathi jikelele yokugoma wokugoma-sesiye (okungukuthi, lesi sifo ingekho abantu ukugonywa). Isimungumungwane livela kuphela ukungabi khona ukugoma noma esimweni amasosha omzimba ebuthaka. Lesi sakamuva kungenzeka kubangelwa izici ngazinye umzimba lomuntu oyedwa, futhi esimweni lapho amasosha isimungumungwana (noma kunalokho titer yabo) e serum sanciphisa kangcono.
Ngokuyinhloko, isimungumungwana kuthinta labantu ingane. Ezimweni eziningi ayathuthuka ngokuvamile ngaphandle ukuthuthukiswa nanoma yiziphi izinkinga. Okwamanje kokuqapha nesimungumungwana ukutheleleka siyagcinwa ngokuqondene nemiphumela emibi ukuthi abesifazane abakhulelwe. Ngakho, lapho isimungumungwane ngesikhathi sokukhulelwa angagcina wazalwa kungakabi isikhathi, kwesisu kanye ukuzalwa kwengane isishonile. Ukuhlaziywa omzimba nesimungumungwana - main futhi mhlawumbe ngendlela kuphela ukuhlonza mzimba obuthaka olubhekiswe kubantu. Ngokuqondene ukuthola lesi sifo, isithombe sokucindezeleka ngempela ejwayelekile futhi uphethwe kuyaqabukela nzima. Kodwa namanje zikhona izimo lapho udinga lokwenza ukuxilongwa umehluko nezinye izifo, kulesi simo, ukwaziswa okunokwethenjelwa ingatholakala ngokufeza ukuhlolwa serological (ukuthola amazinga Igm futhi IgG) okuyiwona ukuthatha igazi amasotsha omzimba nesimungumungwana. Ukuze sithole isimungumungwane immunoglobulin, ayisiza eyenziwa Assay immunosorbent.
Ngokungafani yokugcina, immunoglobulin M akusho ukuwela placenta futhi zigcinwa kuphela amasonto eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa. La masosha omzimba ibonisa isimungumungwane acute unesifo noma yamuva ngokudlulisela ke.
Okwamanje, amasosha nesimungumungwana zinqunywa ikakhulukazi ngezinhloso ezimbili. Eyokuqala - i ukulinganisa esishubile isimungumungwane amasosha omzimba. Esesibili - a zokuhlola sitholakele ezithathelwanayo izifo.
izinguquko Njengoba diagnostically okuphawulekayo ukuhlaziywa jikelele legazi ngesikhathi sesigaba okukhulu lesi sifo, aqoshiwe ezingeni encishisiwe wamangqamuzana egazi amhlophe (ama-neutrophil leukocyte, monocytes, ama-lymphocyte). Izinga eosinophils noma idatha ithole, futhi lumane. Ukudla okuvamile ushintsho erythrocyte sedimentation izinga phezulu.
Ngakho, ngenxa yokugoma (isimungumungwane Sangena ikhalenda yokubopha imigomo zokuvimbela), kanye nokuqapha zesikhathi isimungumungwane masosha omzimba egazini serum abesifazane esikhathini ovundile namathantala ngokuqondile nokuhlela yokukhulelwa isimungumungwane igciwane lalivela kwesifo wokugoma-futhi lesi sifo kwehle kakhulu.
Burn ngamanzi abilayo - yini okumele ngiyenze?
Isifo Periodontal. izimpawu
Enteroplexy: izinhlobo. Izindlela kwakwakhe odongeni emathunjini
Ukuhlaziya TSH, uma sidingeka?
Ngezindlela ezintathu: indlela ukuze uthumele imali "megaphone" ukuze "MegaFon"
Isixhumanisi sokuxhumeka kwe-actuator magnetic ngokusebenzisa isiteshi se-push-button zibe izinkinobho ezimbili "Qala" no- "Stop". Imiyalo
ITire Premium - Class
Njengoba silungiselela kubazali ubizo lokugcina
Utshwala: Cocktail "White Russian"
Indlela ukunciphisa umzimba ku 2 amaviki-10 kg: kunezindlela zangempela?
Theatre - ephelele NgoMgqibelo ebusuku
Zrazy ushizi. ongakhetha ukupheka